चियासँग बिर्सिएर पनि नखानुहोस् यी ३ चिजहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
चियाको चुस्की कयौँ मानिसलाई यति प्यारो हुन्छ कि त्यस्ता व्यक्तिहरु दिनभरीमा धेरै कप चिया पिउने गर्दछन् । कयौँ व्यक्ति त यस्ता पनि हुन्छन् कि चियाँको प्रतिस्पर्धा पनि राख्ने गर्दछन् । त्यस्तै कयौँ व्यक्तिको चिया पिउने समय पनि एकदम ठिक समयमा हुने गर्दछ । यदि त्यस्ता व्यक्तिहरुले आफुले सँधै खाइरहेको समयमा चिया पिउन सकेनन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरुको टाउको दुख्न सुरु हुन्छ । तर के तपाईलाई थाहा छ ? खाली पेटमा चिया पिउँनाले तपाईलाई एसिडिटीको समस्या पनि हुनसक्छ । यसको साथै तपाईले यो जान्न जरुरी पनि हुन्छ कि तपाईले यस्ता चिजलाई चियाको साथसाथै खानु अत्यन्तै हानीकारक मानिन्छ ।
आउनुहोस् जानौँ चियाको साथमा के के पिउनुहुँदैन त ?
बेसनबाट बनेका परिकारहरु
पकौडा, बेसनबाट बनेका रोटी अर्थात बेसनबाट बनेका अन्य चिजहरु पनि चियाको साथमा खानुहुँदैन । यतो किन गरिन्छ भने चियाको साथमा बेसनले बनेका चिजहरु खाएमा शरीरमा पोषक तत्वको कमी हुनसक्छ । यदि तपाई बेसनबाट बनेका चिज चियाको साथमा खान मनपराउनुहुन्छ भने यो बानी आजै हटाउनुहोस् । यदि तपाईलाई चियाको साथमा केही चिज खान नै छ भने अरु चिज खानुहोस् ।
चियाको साथमा, केही व्यक्तिहरू त्यस्ता चीजहरू खान्छन् जसमा कागती निचोरेर राखिएको हुन्छ । यदि तपाईं चियासँग त्यस्ता चीजहरू पनि खान्नुहुन्छ भने, आज तपाईंको बानी बदल्नुहोस्। चियाको साथ लेमनको सेवन गर्नाले ग्यास बाहेक पाचन सम्बन्धी समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईं पनि चियासँग त्यस्ता चीजहरू खानुहुन्छ भने, आजै तपाईंको बानी बदल्नुहोस्। चियाको साथ लेमनको सेवन गर्नाले ग्यासको साथै पाचन सम्बन्धी समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
चिसो चिज नखानुहोस्
तपाईलाई थाहा नै छ होला चियाले गर्मी बनाउँछ भनेर । यस्तो अवस्थामा, जहिले पनि यो कुरा दिमागमा राख्नुहोस् कि चियासँग कहिल्यै पनि चिसो चिजको उपभोग नगर्नुहोस्। नत्र तपाईंको पाचन प्रणालीमा नराम्रो असर पार्न सक्छ। यदि तपाईलाई कुनै चिसो चिज खानु नै छ भने कमसेकम ३ घण्टाको ग्यापमा राखेर खानेगर्नुहोस् । (नयाँ पुस्ता बाट सभार)